जनवरी २, २०११
राजतन्त्र मिल्किएर गणतन्त्र आएपछि नयाँ संविधान बनाउने विषयमा गैह्र आवासीय नेपालीहरू निक्कै सक्रिय देखिएका हुन् । गैह्र आवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) ले सरकारलाई समयमै संविधान बनाउन सचेत गराउँदै आएको हो । संघका तर्फबाट कार्यदलनै बनाएर संविधानका विषयमा...
नोभेम्बर १८, २०१०
-डा उपेन्द्र महतो धेरै ठाउँमा भनिएको हुन्छ कि गैह्र आवासिय नेपालीले सरकारसँग यो मागेका छन्, त्यो मागेका छन् । सरकारसँग हामीले केहिपनि मागेका छैनौं आजसम्म । हामीले सुझाउ मात्रै दिएका छौं । र त्यो सुझाउपनि के दिएको...
२५ जनाको उपस्थितिमा एन आर एन फ्रान्सको भेला
सेप्टेम्बर ३०, २०१०
गत आइतवार एन आर एन फ्रान्सले वार्षिक भेला गरेको छ । कार्य ब्यस्तताले आफु सहभागि हुन सकिएन । तर भेलाका खबर भने मित्रहरुले सुनाए । भेलामा एक पछि अर्को घट्दै गएर यो पटक २५ जना भएछन् ।...
प्रवासमा जन्मे हुर्केको युवा पुस्ता कतातिर ?
सेप्टेम्बर २२, २०१०
-युवराज गुरुङ, बेल्जियम वेल्जियममा नेपाली समुदायको स्थायीत्व सँगसँगै ‘जुनीयर’ एनआरएनको पनि संख्या ह्वात्तै बढेको छ । त्यसो त एनआरएनको परिभाषामा १८ वर्ष मुनिका वालवालीका एनआरएन मानिदैन तथापी तिनीहरु आजका ‘जुनीयर’ र भोलीका सबल एनआरएन भने पक्का हुन्...
एन आर एन युरोपेली भेला: सुने लागेका कुरा
अगस्ट ८, २०१०
एन आर एनको युरोप स्तरीय भेला सकियो । युरोप स्तरीय भएकालेपनि यसको चर्चा, परिचर्चा, गुनासा र बहस हुनु स्वभाविकै हो । कार्यक्रममा फ्रान्स निवासी नेपालीहरूको खासै सहभागिता देखिएन । त्यसले कार्यक्रम स्थानीय स्तरमा सफल भयो कि भएन...
हिराचनका मोती जस्ता कुरा
अगस्ट २, २०१०
चार दिन अघि नाकको अपरेशन गरेको दुखाई छँदै थियो । त्यही बेला शनिवार एन आर एनको युरोपेली भेला पेरिसमा पर्‍यो । साथीभाई आए अरू देशका । विमानस्थल जाउ, कार्यक्रम स्थल पुर्‍याउ, फेरी लीन जाउ साँझ । पेन किलर...
के के छन दोस्रो यूरोपस्तरिय महिला सम्मेलनको घोषणापत्रमा ?
मार्च ८, २०१०
अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसका उपलक्ष्यमा हिजो बेल्जियमको एन्तरपेन शहरमा दोस्रो यूरोप स्तरिय महिला सम्मेलन भयो । पहिलो गत साल पेरिसमा भएको थियो । हिजो भएको सम्मेलनले दोश्रो युरोपीयन महिला सम्मेलन २०१० घोषणा पत्र जारी गरेको छ । घोषणापत्रलाई...
हामीलाई नेपालले के दियो होइन, हामीले नेपाललाई के दियौं?
सेप्टेम्बर २०, २००९
-डा उपेन्द्र महतो एन आर एनका तिन उद्देश्य पुरा गर्नको लागि, यि तिन उद्देश्य सँगै अघि बढ्नको लागि गैह्र आवासिय नेपाली संघलाई बलियो बनाउनु परेको छ । संघका शाखा बिभिन्न देशमा खोल्नुपरेको छ । र एउटा साझा...
डेनमार्कका नेपालीले गरे सहयोग झाडापखाला पिडितलाई
अगस्ट १२, २००९
प्रकाश ढकाल/कोपनहेगन (डेनमार्क) धन हुनेका मन छैनन्, मन हुनेका धन छैनन् भन्ने नेपाली भनाई छ । डेनमार्कमा उति धेरै नेपाली छैनन् । देश नै सानो छ भौगोलिकरुपमा । अनि त्यहाँ नेपाली समुदायपनि सानो छ । तर थोरै...
एनआरएनको क्षेत्रिय सम्मेलन र उठाउनुपर्ने केहि मुद्दा
अगस्ट ८, २००९
गैह्र आवासिय नेपाली संघ (एनआरएन) को क्षेत्रिय सम्मेलन पर्सि सोमबार शुरु हुँदै छ पोर्चुगलको लिसबोन शहरमा । क्षेत्रिय सम्मेलन भनिएकाले पक्कैपनि क्षेत्रिय समस्या, क्षेत्रिय सफलता, चुनौती, भविष्यका योजनाका बारेमा छलफल होलान । आयोजकहरुले पक्कै पनि यसमा तयारि...